एसईईको नतिजा शुक्रबार प्रकाशित हुने !
ARCHIVE, OFF THE BEAT » एसईईको नतिजा शुक्रबार प्रकाशित हुने !
काठमाडौँ - गत चैत्रमा लिईएको एसईई परीक्षाको नतिजा शुक्रबार प्रकाशित हुने भएको छ । परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार एसईईको नतिजा शुक्रबार बेलुका प्रकाशन हुने तयारी भइरहेको छ । यस बर्ष पनि गत बर्षबाट शुरु भएको ग्रेडिङ्कै आधारमा नतिजा सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।
यस बर्ष एसईई परीक्षामा परीक्षामा देशभरका ९ हजार ८ सय ३४ विद्यालयका नियमिततर्फ ४ लाख ६४ हजार ७ सय ४३ तथा प्राविधिक धारतर्फका ३ हजार ६ सय ५७ परीक्षार्थी सम्मिलित रहेको कार्यालयले जनाएको छ । परीक्षामा आंशिकतर्फ ५० हजार ८ सय २७ र एक्जाम्टेडतर्फ १८ हजार ९ सय ९ विद्यार्थी रहेका छन् ।
नतिजाको पर्खाइमा रहनुभएका सबैलाई शुभकामना !